တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း စာမေးပွဲ၏ ပထမဆုံးမြန်မာစာ ဘာသာရပ်ကို မန္တလေးမြို့မှ အသက် (၇၃)နှစ်အရွယ် အဘို?? - Yangon Media Group
တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း စာမေးပွဲ၏ ပထမဆုံးမြန်မာစာ ဘာသာရပ်ကို မန္တလေးမြို့မှ အသက် (၇၃)နှစ်အရွယ် အဘို??
မန္တလေး၊ မတ် ၆
တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းစာမေးပွဲ၏ မြန်မာစာဘာသာရပ်စတင်ဖြေဆိုမှုကို မတ် ၆ ရက် နံနက်(၉)နာရီက စတင်ကျင်းပခဲ့ရာ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်၊ အမှတ် (၅) အခြေခံပညာ အထက်တန်းကျောင်းစာစစ်ဌာန၌ အသက် ၇၃ နှစ်အရွယ်အဘိုး ဦးစိုင်းအောင်ညွန့် လာရောက်ဖြေဆိုခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
”ကျွန်တော့်သား သြစတြေးလျနိုင်ငံမှာ MBA ဘွဲ့သွားယူတဲ့အချိန်မှာ သက်တူရွယ်တူတွေက ဘွဲ့ယူနေတာကိုတွေ့တဲ့အတွက် စိတ်အားထက်သန်လာခဲ့ပါတယ်၊ ဒါပေမဲ့ အရင်ကဖြေဆိုခဲ့တဲ့စာ တွေနဲ့မတူတဲ့အတွက် ဖြေဆိုဖြစ်ခဲ့တာပါ။ တစ်နှစ်ပတ်လုံးစာကို ကြိုးစားလာခဲ့တဲ့အတွက် ဒီလောက်တော့ ဖြေဆိုနိုင်ရမှာပေါ့။ ဒီနေ့ မြန်မာစာဖြေဆိုခဲ့မှုကို ကျေနပ်ပါတယ်”ဟု အဘိုးဦးစိုင်းအောင်ညွန့်က စာမေးပွဲအပြီးပြောသည်။
အဘိုးဦးစိုင်အောင်ညွန့်၏ ဖြေဆိုသည့်ခုံနံပါတ်မှာ မနတ-၅၃၄၊ အ.ထ.က(၅)၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်ဖြစ်ပြီး ဖြေဆိုမည့် ဘာသာရပ်များမှာ မြန်မာစာ၊ အင်္ဂလိပ်၊ သင်္ချာ၊ ဓာတုဗေဒ၊ ရူပဗေဒနှင့် ဇီဝဗေဒဘာသာရပ်ဖြစ်ပြီး နောက်နေ့ဖြေဆိုမည့် အင်္ဂလိပ်စာ ဘာသာရပ်ကိုလည်း ကြိုးစားထားကြောင်း ၎င်းက ဆက်လက် ပြောသည်။
အဘိုးဦးစိုင်းအောင်ညွန့်သည် ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်၊ ကန် ကောက်ရပ်ကွက်တွင်နေထိုင်သူဖြစ်ပြီး ၁၉၄၆ ခုနှစ်၊ ဇွန် ၁၂ ရက်တွင် မွေးဖွားခဲ့ပြီးနောက် နဝမတန်းကို ၁၉၆၄ ခုနှစ်၊ အသက်(၁၈)နှစ်အရွယ်တွင် အောင်မြင်ခဲ့ကာ တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းစာမေးပွဲတွင်ကျရှုံးခဲ့ပြီးနောက် ဆက်လက်မဖြေဆိုခဲ့ဘဲ ယခုနှစ်တွင်ဖြေဆိုရန် စာရင်းပေးသွင်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး အလံနှင့်အစိုးရအဖွဲ့လိုဂိုအသစ်ကို မဲခွဲဆုံးဖြတ်ရာ ကန့်ကွက်သူများ၍
အဆိုတော် ရီတာအိုရာနှင့် မင်းသား အင်ဒရူးဂါဖီးတို့ လမ်းခွဲ
လပေါ်တွင် တွေ့ရှိထားသော အလွန်ကြီးမားသည့် ဂူကြီးထဲတွင် အာကာသယာဉ်မှူးများ နေထိုင်နိုင်ကြောင
ဧရာဝတီတိုင်း အတွင်းရှိ ကြိုးတံတားခြောက်စင်းကို ယာဉ်များဖြတ်သန်းရန် တန်ချိန်လျှော့ချ သတ်မ?
ရန်ကုန် – မော်လမြိုင် ကားလမ်း ဘီးလင်း လမ်းပိုင်းတွင် မိုးသည်းထန်ပြီး တောင်ကျရေများကြောင့် ??
တောင်းစုတ် ပလုံးစုတ်လည်း မဟုတ်ပါဘဲ
ဂျာမနီညွန့်ပေါင်း အစိုးရ ဖွဲ့စည်းနိုင်ရန် မာကယ်နှင့် အတိုက်အခံခေါင်းဆောင် စတင်ဆွေးနွေး
မူးယစ်ဆေးဝါး တားဆီးကာကွယ်ရေးကို အမျိုးသားရေး တာဝန်တစ်ရပ်အဖြစ် မှတ်ယူကာ အလေးထားဆောင်ရွက်ရ?
တန်ဖိုးနည်း အိမ်ဒီဇိုင်းများ ဖန်တီးသည့် အိန္ဒိယ ဗိသုကာပညာရှင် ပရစ်ဇကာဆု ရရှိ
သမ္မတထရန့်က ဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံကို ရွေးချယ်ခွင့်များအတွက် လမ်းဖွင့်ပေးထား ဟုဆို